PressReader - Ilanga: 2017-08-31 - UHLELO LWECHABUTHI LUNEZINZUZO N
UHLELO LWECHABUTHI LUNEZINZUZO N
Ilanga - 2017-08-31 - Imib -
EZINDAWENI eziningi abantu bavame ukushisa utshani. Ngokuqonda kwami lokhu kuvame ukwenziwa ngabanemfuyo ngoba basuke belungiselela ukuthi buzohluma kabusha ukuze imfuyo ithole ukudla. Kwesinye isikhathi kusuke kushiswa indawo ekade yalaliswa, abalimi sebefuna ukuyilima kabusha. Kungaba yisenzo esingenabungozi lesi kodwa uma ngabe umlimi esehehekile ngokulima ngohlelo lwechabuthi, lokhu kakuncomeki.
Kakuvumelekile ukushisa izindawo zokulima ngechabuthi kangangoba kwesinye isikhathi kuze kukhuthazwe ngisho nokutshala kungalinyiwe. Bayakwenza lokhu abalimi kwamanye amazwe ase-Afrika, angithi phela basuke bezama ukunganyakazisi kakhulu la emhlabathini ukuze ungeke uguguleke kalula. Kumqoka nokuqapha ukuthi insimu yakho isondelene kangakanani nekamakhelwane - ngoba uma inobunuku ekamakhelwane kungenzeka buchaphazeleke ngakuwena.
Lobu bunuku esibuchazayo buhambisana nezifo ezihlasela amasimu.
Uma ngabe kade kuhlasele isifo esithile ensimini, udinga ukuqoqa imisala-zifeni uyibhubhise ngomlilo. Qaphela kodwa ukuthi umlilo uwushisela kuphi, kanjani ngoba uhlelo lwechabuthi kaluvumi kushiswe amasimu. Kubalulekile ukuba umlimi akwazi ukuhlukanisa ukhula oluwusizo koluyisichitho ensimini ukuze azuze. Uma ngabe umlimi enemfuyo ayinakekelayo, kumqoka ukuba azi uhlobo lokhula oluyisikhuthazakhaba lube futhi lukwazi ukondla imfuyo ngoba uma kunjalo ungadedela imfuyo ensimini ngesikhathi esiqondene.
Ngale ndlela uhlelo lwakho selumbanda-